Filankevitry ny tanàna: natao hanehoan-kevitra ny kianjan’Ambohijatovo | NewsMada
Filankevitry ny tanàna: natao hanehoan-kevitra ny kianjan’Ambohijatovo
Nivory nandritra ny 3 andro ny filankevitry ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, nanomboka ny alatsinainy teo, nifarana omaly. « Lahadinika maro no nandraisana fanapahankevitra tamin’izany » hoy ny filohan’ny filankevitry ny tanàna, ny kolonely Andriambahoaka Faustin. Nisongadina tamin’izany ny fanatsarana ny kianjan’Ambohijatovo, fantatra fa kianjan’ny demokrasia io kanefa mipetraka fotsiny eo tsy mampiseho izay fanjakan’ny demokrasia eto amin’ny tanàna izay .
Misisika hampiasa ny eo amin’ny kianjan’ny 13 mey ireo mpanao fihetsiketsehana kanefa eny Ambohijatovo no tena tokony hanehoan-kevitra. Ilàna fikarakaràna sy hoenti-manana anefa ny asa fanamboarana ka tapaka tamin’ny fivoriana fa nomena « accord de principe » ny mpanatanteraka, hitady ny fomba rehetra hoentina mikojakoja ny kianja.
Hasiana sehatrasa hahazoana vola hikarakarana ny toerana. Tsy maintsy misy toerana amin’ny maha kianjan’ny demokrasia azy anefa ao anatin’ny kianja.
Nodinihina koa ny bokin’andraikitra mikasika ny fitaterana eto amin’ny tanànan’Antananarivo. Tapaka ny hanaovana tsaratsara kokoa ny fomba fitantanana ny fitaterana. Hatramin’izay, nisy ny bokin’andraikitra nefa tsy nisy fanatanterahana, na fanaraha-maso ny zavatra natao. Izao dia tapaka fa hiara-kientana ny ambaratonga rehetra hiaraka hanara-maso ny zavatra tapaka ao anatin’io bokin’andraikitra io. Ao anatin’izany, ny fijerena ny resaka tsolotra izay mampitaraina ny mpitatitra.
Tapaka ihany koa ny fanatsaràna ny sampana mpamonjy voinan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Nametrahana fomba vaovao ao anatiny, hahafahana manatsara ny resaka vonjy taitra eto amin’ny Renivohitr’i Madagasikara.
Tapaka ihany koa fa ho hatsaraina ny kianjaben’i Mahamasina izay natao hisokatra ho an’ny vahoaka rehetra, indrindra, ny lafiny fanatanjahantena. Hamboarina ny kianja, hesorina izay zavatra tsy mety hitondra aina vaovao ho an’ny rehetra mampiasa io toerana io.